» उत्कृष्ट डान्ससँगै बाहिरिईन् पुजा ठाकुर
उत्कृष्ट डान्ससँगै बाहिरिईन् पुजा ठाकुर
३ कार्तिक २०७७, सोमबार २०:१९
मकवानपुर, ३ कात्तिक । मैथिली समाजकी चर्चित अभिनेत्री पूजा ठाकुर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालबाट बाहिरिएकी छिन् । उनले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको स्टेजमा अन्तिम पटक सर्वाधिक हिट प्रस्तुति दिँदै बाहिरिएकी हुन् । निर्णायकहरुले उनको नृत्यलाई शोमा नै अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रस्तुति भनेका थिए तर उनी बटम थ्रीमा परेसँगै बाहिरिन बाध्य भएकी छिन् । उत्कृष्ट १० सम्म आएर चौथो हप्तासम्म शोमा नै रहेकी पूजाले ३ वटा नृत्य कोरियोग्राफर राजिव समरसँग र एउटा नृत्य कोरियोग्राफर सरोज मोक्तानसँग प्रस्तुत गरेकी थिईन् । राजिवसँग पुराजिव जोडीका रुपमा चर्चा कमाएकी पूजाले अन्तिम प्रस्तुतिमा सरोजसँग थप तहल्का मच्चाउने प्रस्तुति दिएकी थिईन् । सरोजसँग उनको जोडीको नाम पुरोज राखिएको थियो । शोमा सबै निर्णायक तथा दर्शकहरुको मन जित्दै आएकी पूजा बाहिरिँदा निर्णायकदेखि दर्शकसम्मका आँखा रसाएका थिए । सहभागीहरुले उनको नृत्यको प्रशंसा गर्दै उनी बाहिरिँदा पनि सम्मान स्वरुप स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । हेर्नुहोस् यो भिडियो फिचर–
पूजाले यस शोको अन्तिम नृत्य ‘के माया लाग्छ र’ बोलको गीतमा गरेकी थिईन् । सरोजसँग प्रस्तुति दिएकी उनले यस गीतमा कलिहप डान्स फर्म प्रयोग गरेकी थिईन् । निर्णायक रेनेशा राईले पुजाको यो प्रस्तुतिलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रस्तुति भएको बताएकी थिईन् । निर्णायक दिलिप रायमाझीले पनि यो प्रस्तुति पूजाको अहिलेसम्मकै बेस्ट प्रस्तुति भनेका थिए । उनले यो जोडीलाई पछिसम्मै देख्न पाईयोस् भनेर कमेन्ट गरेका थिए । निर्णायक गौरी मल्लले पनि पुजाको एक्स्प्रेसन सर्वाधिक राम्रो भएको भन्दै उनको प्रस्तुति बेस्ट भएको बताएकी थिईन् । पूजा र सरोजलाई निर्णायक रेनेशाले ८ अंक, गौरीले ९ अंक र दिलिपले १० अंक गरी जम्मा २७ अंक प्रदान गरेका थिए । यसअघि पुजा र राजिवको जोडीले पहिलो र दोस्रो प्रस्तुतिबाट २४–२४ अंक र तेस्रो प्रस्तुतिबाट २३ अंक प्राप्त गरेका थिए । यसरी पूजाले चौथो प्रस्तुतिसम्म जम्मा ९८ अंक प्राप्त गरेका थिए । पुजा र राजिवको जोडीले पहिलो हप्ता फ्रि स्टाईल कन्टेम्प्ररी, दोस्रो हप्ता मुज्रा कलिउड र तेस्रो हप्ता कलिउड फर्मममा डान्स गरेका थिए ।
पूजा र सरोजसँगै दोस्रो ईलिमिनेशन विकमा प्रशान्त ताम्राकार र स्वयत्न योञ्जनको प्रयत्न जोडी तथा हरि खड्का र युमी बलामीको हामी जोडी बटम थ्रीमा परेका थिए । प्रयत्न जोडीले चौथो हप्तासम्म आईपुग्दा १०१ अंक र हामी जोडीले पनि चौथो हप्तासम्म आईपुग्दा जम्मा १०१ अंक नै प्राप्त गरेका थिए । यसरी बटम लाईनमा परेका ३ जोडीहरुमध्ये प्रयत्न र हामी जोडी दर्शक भोट तथा निर्णायकको मतका आधारमा सेभ भएका थिए भने पूजा र सरोजको जोडी बाहिरिएका थिए । उनीहरुको जोडी बाहिँरिँदै गर्दा निर्णायक र सहभागीहरुको आँखा रसाएका थिए । शोबाट बाहिरिँदै गर्दा पूजाले आफुले शोमा आएर प्रस्तुति दिनपाएकोमा खुशी लागेको बताएकी थिईन् । आफु स्टेजमै रहिरहेको भए अझै पनि आफुले कला प्रदर्शन गर्ने मौका पाउने थियो भन्दै दुखेसो गरेकी थिईन् । शोका आयोजक, निर्णायक तथा स्टार र कोरियोग्राफरहरु सबैलाई धन्यवाद भन्दै गर्दा पूजा भक्कानिएकी थिईन् । उनी भक्कानिएसँगै स्टेजमा भावुकता छाएको थियो । सबै टिमलाई र कोरियोग्राफर राजिव समरलाई पनि मिस गर्ने भन्दै उनले दुई वटा पार्टनरसँग नृत्य गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेकी थिईन् । सरोजले पनि आफुले दोस्रो पटक गरी दुई जनासँग नृत्य गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए । उनी पहिलो पटक कलाकार रक्षा श्रेष्ठसँग जोडी बाँधेर शोमा प्रवेश गरेका थिए । रक्षाको स्वास्थ्य समस्याका कारण उनीहरुले यसअघि शो क्वीईट गरेका थिए । पूजा र सरोज बाहिँरिँदै गर्दा सबै जना भावुक भएका थिए ।
पुजा ठाकुर मैथिली समाजका एक चर्चित अभिनेत्री हुन् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कोरियोग्राफर राजिव समरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी पुजाका म्युजिक भिडियोहरु पनि चर्चामा छन् । वि.सं. २०५३ साल भदौ ९ गते धनुषा जिल्लाको साविक सबैला गाविस वडा नम्बर ७ हाल सबैला नगरपालिकामा जन्मिएकी पुजा बाबु लालनारायण ठाकुर र आमा सिता ठाकुरकी जेठी छोरी हुन् । वि.स. २०६८ सालमा एसएलसी सकाएकी पुजाले २०७१ सालमा स्टाफ नर्सको अध्ययन सकाएकी थिईन् । जनकपुर निवासी पुजालाई उनकी आमा सरिता ठाकुर आफु नर्स भएकोले पुजालाई पनि नर्स बनाउन चाहान्थिन् । त्यसकारण पुजालाई उनकी आमाले नर्स समेत पढाउनुभएको थियो तर पुजाको रुचि भने नर्सिङमा भन्दा कलाकारितामा थियो । त्यसकारण पुजा कलाकारितामै लागिन् । मैथिली समाजमा कलाकारितालाई धेरै राम्रो नमानिने भएकोले सुरुमा नर्सिङ पेशामा लागेपनि पछि पुजाले नर्सिङ पेशालाई त्यागेर कलाकारितामा पाईला टेकेकी थिईन् । जनकपुरमा सिताको रोल निभाएर भाईरल भएकी पुजालाई धेरैले सिता माता भनेर चिन्छन् । पुजाले अभिनयका साथै जनकपुरधामको मुरलीसरमा ‘ए वन डान्स स्टुडियो’ संचालन गर्छिन् । अभिनय र नृत्यका अलावा लेखनमा पनि सक्रिय पुजाले नाटक, डकुमेन्ट्रीदेखि चलचित्रसम्म अभिनय गरेकी छिन् । नेपाली, मैथिली र हिन्दी भाषाका गीतहरुमा पनि मोडलका रुपमा काम गरेकी पुजाले देशबाहिरका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् ।
राजिव समर चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन् । उनी निर्देशकका साथै क्यासेट फिल्मस् स्टुडियोका संचालका पनि हुन् । राजिव समरको वास्तविक नाम राजिव कुमार कर्ण हो । अहिले भाईरल भईरहेका विभिन्न गीतका म्यूजिक भिडियोका साथै चलचित्रहरुमा कोरियोग्राफी गरिसकेका राजिव समर नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक चर्चित कोरियोग्राफरका रुपमा चिनिन्छन् । उनको कोरियोग्राफीमा नेपाली चलचित्रका धेरै गीतहरु चर्चामा आएका छन् । जनकपुर निवासी राजिव यस पटक डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा मैथिली अभिनेत्री पुजा ठाकुरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जनपुरबाट कोरियोग्राफी यात्रा सुरु गरेका राजिव अहिले काठमाडौँमा बस्छन् ।
सरोज मोक्तान चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन् । नेपाली डान्सिङ रियालिटी शो बुगीवुगी नेपालका सेकेण्ड रनर अप समेत भएका सरोज नेपाली डासिन्ङ क्षेत्रमा चम्कँदै छन् । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा लोकप्रिय अभिनेत्री रक्षा श्रेष्ठसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । उनले पून एकपटक कलाकार पूजा ठाकुरसँग पनि स्क्रीन शेयर गरेका थिए । आफ्नो डान्स स्किल र प्रस्तुतिले बुगीवुगीमा निर्णायक र प्रतिस्पर्धीहरुलाई नै चकित पारेका सरोज काभ्रेपलाञ्चोकका हुन् । काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर ७ वनखुका सरोजले सामान्य परिवारबाट संघर्ष गर्दै सफलताको शिखर चुमेका छन् । सानैमा गाउँबाटै विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नाचेर उनले नृत्यलाई तिखारेका थिए । बुगीवुगीमा जानुअघि पनि विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताहरुमा प्रथम भएका सरोज बुगीवुगीपछि थप चर्चामा आए । उनी अहिले चर्चित म्युजिक भिडियोमा कोरियोग्राफी गर्नुका साथै अभिनय पनि गर्छन् । उनी फिल्मी कोरियोग्राफीमा पनि चर्चामा छन् ।